कर्पोरेट(Corporate) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
रु. १८.०१ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, सोमबार बोलकबोल
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा मोबाइल बैंकिङ एपलाई ओम्नीच्यानल एपमा स्तरोन्नति
साइमेक्सले ल्यायो ‘नेभर सिन फिस्कल इयर एन्ड अफर’
जनरल इन्स्योरेन्सको रक्तदान कार्यक्रम
काठमाण्डौ । व्यवसाय सञ्चालन दिवसको अवसरमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज शुभकामना आदानप्रदान तथा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारीले रक्तदान गरेका थिए। कम्पनीका अन्य शाखाहरुमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थापना दिवस मनाइएको...
एनएमबि बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण केबलकारमा छुट
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकका ग्राहकले अन्नपूर्ण केबलकारमा छुट पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताअनुसार बंैकका ग्राहकले पोखराको अन्नपूर्ण केबलकारको टिकट खरिद गर्दा र एनएमबि बैंकको क्रेडिट, डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। बैंकले डिजिटल बैंकिङ अभियानअन्तर्गत नगदसहितबाट नगदरहित डिजिटल...
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा बचत खातामा उपलब्ध घातक रोगको बीमाबापत तीन ग्राहकलाई रु. ३० लाख भुक्तानी
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंकले सर्वश्रेष्ठ बचत खाता तथा न्यू प्रिमियम सुपर चमत्कारिक बचत खाता योजनाअन्तर्गत उक्त बचत खाता खोलेका ३ जना ग्राहकलाई घातक रोगको बीमाबापत प्रतिव्यक्ति रु. १० लाखको दरले कुल रु. ३० लाख बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ। बीमा लाभ प्राप्त गर्नेमा बैंकको इलाम शाखामा सर्वश्रेष्ठ बचत खाता ‘एम्बेसडर’ श्रेणीको खाता...
प्रदेश १ मा बैंक अफ काठमाण्डूको घरदैलो कार्यक्रम
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले सबैलाई सहज बैंकिङ प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैंकका प्रदेश १ अन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुले घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको २ निक्षेप योजनाहरुको जानकारीमूलक तथा विभिन्न बैंकिङ सेवाहरुको जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त घरदैलो...
हिमालयन क्यापिटलद्वारा वुमन लिडका सदस्यहरुलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन प्रशिक्षण
काठमाण्डौ । हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै उद्यमशीलताको विकास गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने क्रममा हिमालयन क्यापिटलले वुमन लिड संस्थाका सदस्यहरुका लागि एकदिने उद्यमशीलता प्रवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रममा क्यापिटलका...
गुल्मीमा अजोड इन्स्योरेन्सको कृषि तथा पशुपन्छी क्षति मूल्यांकनकर्ताको तालिम
काठमाण्डौ । बीमा समितिको स्वीकृतिबमोजिम अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत जेठ २९, ३० र ३१ गते गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिकामा कृषि तथा पशुपन्छी क्षति मूल्यांकनकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको छ। तालिममा अजोड इन्स्योरेन्सबाट दीपक पोखरेल, प्रेमराज पाण्डे र सुदीप पौडेलले प्रशिक्षण दिएका थिए। तालिममा २३ जना क्षति मूल्यांकनकर्ताको...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र STEM Center बीच छुट सम्झौता
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र STEM Center (Sugar, Thyroid, Endocrinology and Multispecialty Center) बीच सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र STEM Center का अध्यक्ष डा. बजरंगकुमार रौनियारले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौतापश्चात आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका...
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई दि क्लिफमा आकर्षक छुट
काठमाण्डौ। प्रभु बैंक लिमिटेडले ग्राहकले दि क्लिफ प्रालिमा आकर्षक छुट पाउने भएका छन्। प्रभु बैंक र दि क्लिफबीच आज (असार ५) गते छुट सम्झौता भएको हो। प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। बैंकका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश मुख्य व्यवसाय केन्द्र अधिकारी शान्ति शेरचन र दि क्लिफका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वरध्वज क�...
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा १५ औँ शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानमा सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ थप नयाँ स्थानमा मोबाइल एपमार्फत शाखारहित बैंकिङ सेवा शुभारम्भ गरेको छ। बैंकले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा आज असार ५ गते आइतबारबाट नवलपरासी जिल्लाको कावासोती नपा–७ साँढमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा...
नबिल बैंकका कार्ड प्रयोगकर्तालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्न कतार एयरवेजसँग सम्झौता
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले कतार एयरवेजसँग बैंकका कार्ड प्रयोगकर्तालाई विशेष सुविधाप्रदान गर्न सम्झौता गरेको छ। जसअन्तर्गत नबिल बैंकका कार्ड प्रयोगकर्ताले युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका चुनिएका गन्तव्यहरुमा लागू हुनेछ र हवाई टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। यो छुट मिति असार १७ गतेदेखि लागू हुनेछ। आज आयोजित एक कार्यक्रममा नबिल...
सिटिजन्स बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा धनुषाको रमदैया भवाडीमा
काठमाण्डौ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशका विभिन्न दुर्गमस्थलका बासिन्दालाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। यसै क्रममा बैंकले धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ रमदैया भवाडीमा यही असार ३ गतेबाट ९४ ओैँ शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रारम्भ गरेको छ। सो...
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल प्रहरीसँग साझेदारी
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त मालीगाउँसँग साझेदारीमा जनचेतनामूलक पर्ची, महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर समेटिएका स्टिकरस, फेस मास्क, प्रिन्टर आदिजस्ता सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। यस सहयोगहरुबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ...
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई ग्यालेक्सी स्पेसियालिटी क्लिनिकमा छुट
काठमाण्डौ । ग्राहकलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र काठमाण्डौको महाराजगन्जस्थित ग्यालेक्सी स्पेसियालिटी क्लिनिक प्रालिबीच सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त सम्झौतापश्चात बैंकको डेबिट कार्ड र क्यूआर (स्क्यान पे) महालक्ष्मी मोबाइल बैंकिङमार्फत...
एनएमबि बैंकले ल्यायो मुद्दतिमा डब्बल प्रतिफलको योजना
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंकले आफ्ना व्यक्तिगत ग्राहकका लागि आकर्षक मुद्दति योजना ‘एनएमबि डबल मुद्दति’ र ‘एनएमबि जन्मभूमि डबल मुद्दति’ सार्वजनिक गरेकोे छ। ‘एनएमबि डबल मुद्दति योजना’अन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम मौज्दात रु. ५० हजार वा सोभन्दा बढी रकमको मुद्दती खाता खोल्दा ७६ महिनापछि सो रकम डबल हुनेछ। त्यसैगरी ‘एनएमबि जन्मभूममि...
वार्षिकोत्सवमा आनद्वारा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना
काठमाण्डौ । नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले शुक्रबार आफ्नो ३२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। आनले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा सचिवालय भवन सानो खरिबोट शान्तिनगरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा आनका वर्तमान तथा संघका पूर्वपदाधिकारी, सदस्य एजेन्सी र विज्ञापन व्यवसायसँग सम्बन्धित...
फोनपेको ‘फोनपे डाइरेक्टमार्फत पैसा पठाउँ, ठाउँको ठाउँ’ अभियान सञ्चालनमा
मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकको सुझाव: मर्जरको व्यवस्था नगर्दा उपयुक्त, बरु हकप्रद जारी गर्न देऊ
सेयर बजारमा हरियाली, पुँजीबजारमैत्री मौद्रिक नीति आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा
राहदानी अब १५ दिनभित्र आफ्नै जिल्लामा पाइने, काठमाण्डौ आइरहनु नपर्ने
काठमाण्डौ उपत्यकामा सिटिजन्स बैंकको थप ३ शाखा विस्तार
थप ९ कम्पनीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको स्वीकृति, अहिलेसम्म क-कसले पाए ? (सूचीसहित)
चालु आ.व.मा सरकारले उठायो रु. २.३१ खर्ब आन्तरिक ऋण (सूचीसहित)
इलेक्ट्रिक गाडीहरु कति इको–फ्रेन्डली हुन्छन् ? यस्तो छ वास्तविकता
विदेशमा रहेका नेपालीलाई एनआईबिएल एस क्यापिटलको सेयर बजारसम्बन्धी तालिम
फापेन विश्वका धनाढ्यलाई वर्ष २०२२, ६ महिनामै गुमाए रु. १७६ लाख करोड
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र ग्यालेक्सी स्पेसल्टी क्लिनिकबीच छुट सम्झौता